Bafuna kucaciswe ngokuqashwa | News24
Bafuna kucaciswe ngokuqashwa
UPHIKO lwentsha ngaphansi kwenhlangano yeSouth African Communist Party (SACP) luthi sekufike lapho selihluleka khona ukubekezelela indaba yokuba kudlalwe ngabantu abasha bathenjiswe imisebenzi kodwa ekugcineni kugcine kungacacanga ukuthi iphelela kuphi. Lokhu kwenzeke ngemuva kokuba kwaphuma isikhangiso semisebenzi kamasipala waseRay NKonyeni kodwa okungakaze kuqashwe bantu kuyona kuze kube imanje.
UMnu Mzamo Nyawose ongunobhala weSACPYL uthi kunezikhala eziyinqwaba ezakhangiswa ngumasipala waseRay Nkonyeni kodwa kuze kube yimanje akuveli ukuthi kwenzekalani ngazo. Uthi lezi zikhala ezakhangiswa ngenyanga kaNhlaba (May) abantu abasha basadukuza ebumnyameni njengalokhu ethi bayakholelwa ekutheni abantu abakaze babizwe sanhlobo ukuze baye kunhlolokhono.
Uthi beNgufasimba okubakhathaza kakhulu ngukuthi kukhona osopolitiki abathile asebesebenzisa lezi zikhala ukuzuza amaphuzu ngokwezepolitiki.
“Sikhathazekile ngoba abantu abasha balesi sifunda abaqashiwe futhi bayayidinga imisebenzi,” kusho yena.
Uthi ukumiswa kwalemisebenzi kungaqhutshekwa nokuqashwa abasebenzi kwenza ngisho intuthuko ingaqhubekeli phambili kulokhu kuthiwa kukhona izikhala ezisagcwaliswa.
Okhulumela umasipala uMnu Simon April uvumile ukuthi umasipala unezikhala owazikhangisa kodwa ezinye zazo ezingakagcwaliswa njengalokhu kusahlelwa indlela yokubanjwa kwenhlolokhono. Uthi ngesihathi kukhishwa lezi zikhangiso kwaphoqa ukuba kungasheshi ukuba kwenziwe inhlolokhono ngoba kwakusamele amakhansela aqale emukele uthetho nomgomo wokuqasha.
Uthe zonke izikhala zizogcwaliswa kodwa ngukuthi umasipala usafuna ukuqedela nokulangela imigudu efanele ukuze kube ngukuthi kuqashwa ngendlela eyiyona ayi enokwenzelela.